Home » Toerana fitsangatsanganana » Mikendry ny tsena any ivelany mitombo ny Balkans
Ny Balkans no faritra eropeana farany kendrena mikendry ny tsena ivelany mivoatra.
Bulgaria, Serbia ary Makedonia, samy manana ny manintona azy manokana, dia nanao fanentanana tany India mba hananana fahatsiarovan-tena bebe kokoa eo amin'ireo masoivoho sy mpandeha Indiana.
Bayko Baykov, mpitantana jeneraly, ary Stefan Kirov, mpitantana zokiolona ao amin'ny Bohemia DMC, dia nilaza tao Delhi tamin'ny 16 Aogositra fa manana faritra mahaliana maro sy fahita manokana ity faritra ity miaraka amina fitsangatsanganana voalamina tsara.
Nanantitrantitra i Kirov fa tena zava-dehibe ny vidiny, satria ny fandaniana amin'ny dia, ary koa ny fiantsenana sy ny divay, dia mora vidy kokoa any Bulgaria sy toerana itodiana Balkan hafa noho ny ankamaroan'ny faritra any Eropa. Izany dia tokony ho fandrisihana lehibe ho an'ireo mpandeha Indiana.
Ny spa, ny ski, ny tranombakoka an-kalamanjana, ny casino ary ny manintona hafa, ary koa ny indostrian'ny ranomanitra sy divay, dia mora vidy kokoa any amin'ireo firenena Balkans.
Ny fizahantany amin'ny ririnina any Bulgaria dia manana fanantenana tsara ihany koa.
Ny minisitry ny fizahan-tany an'i Seychelles dia nahafaly ny fari-pitsipika manaraka ny fitsidihany ny trano kely sy lehibe any La Digue
'Fantasy' an'i May: Tian'ny UK ny Brexit… tsy misy fetra ho an'i Irlandy Avaratra